एलिटको कक्षाकोठा व्याख्या गरिएको - क्र्याडल दृश्य
by Dima 13th नोभेम्बर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड अभिजात वर्गको कक्षामा व्याख्या गरियो
क्लासरूम अफ द एलिट एनिमे एउटा लोकप्रिय एनिमे थियो जुन मूल रूपमा १२ जुलाई २०१७ मा बाहिर आएको थियो। एनिमे त्यही नामको मङ्गामा आधारित थियो जुन सन् २०१६ मा मिडिया फ्याक्ट्रीको मासिक कमिक अलाइभमा बाहिर आएको थियो। एनिमेलाई राम्रोसँग स्वागत गरिएको थियो र उनीहरूले पहिले नै एलिट सिजन २ को कक्षाको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् किनकि हामी २०२२ को नजिक पुग्छौं।
अगाडि एनिमको अन्तिम एपिसोडको लागि स्पोइलरहरू छन् भनेर सल्लाह दिनुहोस्।
सिंहावलोकन - कुलीन वर्ग को व्याख्या
एनिमे MC बाट सानो मोनोलोगबाट सुरु हुन्छ कियोटाका जहाँ उनी भन्छन् कि सबैजना समान रूपमा जन्मिएका छैनन्। हामीले कभर गरेका छौं कियोटाका हाम्रो कक्षाकोठामा एलिट सिजन २ लेख। उसले भर्खरै आफ्नो पहिलो वर्ष सुरु गरेको छ उन्नत पोषण हाई स्कूल जहाँ जापानका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू मात्र उपस्थित हुन सक्छन्।
उन्नत पोषण हाई स्कूल - कुलीन वर्ग को व्याख्या
विद्यालयले उत्कृष्टलाई मात्र अनुमति दिन्छ किनभने विद्यालयको वास्तविक उद्देश्य समाजको उत्कृष्ट र प्रभावकारी सदस्यहरू उत्पादन गर्नु हो। यी हुन्: राजनीतिज्ञ, डाक्टर, बैंकर, आदि। यद्यपि, त्यहाँ एक क्याच छ। विद्यालयले शिक्षणको सबैभन्दा परम्परागत विधिहरू प्रयोग गर्दैन। यसको सट्टा, विद्यालयले अधिक अपरंपरागत विधिहरू प्रयोग गर्न रोज्छ।
पहिलो दिन, हामी वास्तवमा यस प्रणालीको लागि शिक्षकको रूपमा सिक्छौं कियोटाका कक्षाले तिनीहरूलाई पहिलो एपिसोडको अन्त्यमा बताउँछ। शिक्षकले कक्षालाई ४ कक्षामा विभाजन गरेको बताउँछन्। कक्षा A, B, C, र D। कक्षाहरूले उनीहरूको समग्र अनुभव, बुद्धिमत्ता, र समस्या समाधान गर्ने सीपहरूका आधारमा विद्यार्थीहरू कुन स्तरमा छन् भनेर निर्धारण गर्दछ। तिनीहरू सबै छनोट हुन्छन् र तिनीहरूको कक्षामा पङ्क्तिबद्ध हुन्छन् जब तिनीहरू सुरु हुन्छन् र यहीँ हो कियोटाका कक्षामा आफ्नो परिचय दिन्छ।
पात्रहरु - एलिट को कक्षा को व्याख्या
पहिलो, हामीसँग छ कियोटका अयानोकजी, जो मा एक विद्यार्थी हुनुहुन्छ उन्नत पोषण विद्यालय। उहाँ धेरै बोरिंग र सामान्य हुनुहुन्छ। एक निश्चित POV बाट उहाँसँग वास्तवमा कुनै पनि रोचक चरित्र लक्षणहरू छैनन्। यो केवल सिजन 1 को अन्तिम एपिसोडमा ठीकसँग प्रकट भएको छ कि उसले आफ्नो सहपाठीहरूलाई व्यवहार गर्ने र आदर गर्ने तरिकामा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक लक्षणहरू प्रदर्शन गर्दछ। यसले स्पष्ट रूपमा उसलाई थप चाखलाग्दो बनाउँछ र अन्तिम एपिसोडमा उनले के भनेका थिए भन्ने सुन्दा यसले मलाई गार्ड बन्द गर्यो। यदि त्यहाँ एलिट सिजन २ को कक्षा कोठा छ, कियोटाका पक्कै पनि यसमा हुनेछ।
अर्को हो सुजुन होरकिता जसलाई मैले सुरुमा असहनीय ठानेको थिएँ। उनी एक अडिग स्वभावकी छिन् र अरूलाई तुच्छ देख्छिन्। उनीसँग धेरै साथीहरू छैनन् जस्तो देखिन्छ र धेरै अप्रिय छिन्। उनी धेरै असामाजिक छिन् र अरूसँग कुरा गर्ने तरिकामा अक्सर दुर्भावनापूर्ण छिन्। उनी किन यस्तो छिन् भन्ने कुरा कहिल्यै खुलेको छैन । हुनसक्छ यो उनको जेठो भाइको कारणले हो, म साँच्चै पक्का छैन, तर उनको चरित्र वास्तवमा त्यति धेरै गएको छैन। होरिकिता पक्कै पनि मा देखा पर्नेछ अभिजात वर्गको कक्षा.
उनी पनि एक कपटी छिन् र अक्सर मजाक गर्छिन् कियोटाका आफूलाई संलग्न गर्ने कारणहरूका लागि। उनी आफैं बसेकोमा उसको मजाक गर्छिन्, तर पनि उही काम गर्छिन्? यसले मलाई उनको चरित्र धेरै मन नपराएको थियो। यो विडम्बनापूर्ण छ कि उनी कत्ति चतुर छिन् भन्ने सोच्दछन् यद्यपि उनी खेल्छन् कियोटाका जे भए पनि। उसले उसलाई आफ्नै फाइदाको लागि प्रयोग गर्छ, उसले जे भए पनि अनुमति दिनुपर्छ।
हामीसँग अन्तिम पटक छ किक्यो कुशिदा जसले धेरै न्यानो, शान्त र हेरचाह गर्ने व्यक्तित्व देखाउँछ। उनी आफ्ना सहपाठीहरूका बीचमा राम्रोसँग मन पराउने देखिन्छिन् र समग्रमा राम्रो कोमल स्वभाव देखाउँछिन्। पहिलो एपिसोडमा पनि उनले आफ्नो मुख्य लक्ष्य विद्यालयका हरेक व्यक्तिसँग साथी बन्ने रहेको बताएकी छिन् ।
यद्यपि3वा चौथो एपिसोडमा, यो देखाइएको छ कि उनको पूर्णतया फरक पक्ष छ, र उनले धेरैजसो समय प्रदर्शन गर्ने व्यक्तित्व पूर्ण रूपमा नक्कली छ। यो डरलाग्दो छ र फेरि सोसियोपैथिक लक्षणहरू प्रदर्शन गर्दछ तर उनको रहस्य पत्ता लगाउने एक मात्र हो कियोटाका। त्यसपछि उनले आफ्नो गोप्य खुलासा गरेमा उनले आफूलाई बलात्कार गरेको दाबी गर्ने भन्दै धम्की दिन्छिन्। यसले उनको वास्तविक व्यक्तित्व देखाउँछ, यद्यपि, उनले अरू सबैलाई मूर्ख बनाउँछिन् होरिकिता, जसले बेवास्ता गर्छ र सामान्यतया उनीबाट सामान्य रूपमा टाढा रहन्छ।
उप क्यारेक्टरहरू - एलिटको कक्षाकोठा व्याख्या गरिएको
मलाई यो शृङ्खलाका धेरैजसो पात्रहरूसँग कुनै समस्या थिएन, तर केहीलाई तिनीहरूको ओभर-द-शीर्ष संवादका लागि असहनीय लाग्यो, विशेष गरी मनाबु, उसले सोचेको जस्तो थियो Horatio Kane बाट CSI मियामी। जे होस्, त्यहाँ केहि राम्रा रोचक पात्रहरू थिए जुन मलाई धेरै मन पर्यो जस्तै चाबशीरा र र्युउएन.
क्लास पोइन्ट सिस्टम - कुलीन वर्ग को कक्षा
कथाको वास्तविक स्वर र आधारहरू पहिलो एपिसोडको अन्त्यमा सेट गरिएको छ। सबै विद्यार्थीहरूलाई निश्चित मात्रामा अंकहरू दिइन्छ जुन तिनीहरूले कपडा, खाना, सामानहरू, र अन्य घर प्रयोग र जीवनशैलीका वस्तुहरू खरिद गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। यी मध्ये केही वास्तवमा वास्तवमा आवश्यक छैन। यसको उदाहरण हुनेछ PSP (मलाई लाग्छ) जुन यामाची पहिलो एपिसोडमा किन्छन्।
क्लास पोइन्ट सिस्टम - एलिट को कक्षा को व्याख्या
यो एक वस्तु होइन जुन उसलाई वास्तवमै चाहिन्छ तर उसले अझै पनि यो किन्छ। त्यसोभए विद्यालयले किन विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा यस्ता बेकारका वस्तुहरू किन्न अनुमति दिने? तिनीहरूले कहिले सिक्ने र कक्षाहरू अगाडि बढाउनु पर्छ? कारण यो हो कि यो सबै एक परीक्षण हो। हो, यो सहि हो, पहिलो एपिसोडको अन्त्यमा हामीलाई अंकहरू वास्तवमा असीमित छैनन् भनेर भनिएको छ, (तिनीहरूलाई भनिएको होइन) र प्रत्येक कक्षामा अंकहरूको उच्च औसत हुनु आवश्यक छ ताकि तिनीहरूले कक्षाहरू परिवर्तन गर्न सकून्। ।
Ryuuen आफ्नो कक्षा अंक गणना - अभिजात वर्ग को कक्षा को व्याख्या
अब, के कुराले मलाई चाखलाग्दो बनाउँछ कि यो प्रत्येक विद्यार्थी होइन जसले आफ्नो लागि पर्याप्त अंकहरू जम्मा गरेमा अर्को कक्षामा जान सक्छ। यसको सट्टामा अंकहरू गणना गरिन्छ र कक्षाको औसत बिन्दु तर्फ बाहिरिन्छ। त्यसैले यदि कक्षा D भनौं भन्दा अङ्कको उच्च औसत पुग्छ कक्षा सी, कक्षा D ओभरटेक गर्नेछ कक्षा सी र नयाँ बन्नुहोस् कक्षा सी, जबकि मूल कक्षा सी तल जान्छ र नयाँ बन्नेछ कक्षा D.
क्लासमा द्वन्द्व र टीमवर्क - एलिटको कक्षाकोठा व्याख्या गरियो
मलाई यो विचार साँच्चै मनपर्‍यो किनभने अरू भन्दा उच्च प्रदर्शन गर्न व्यक्तिगत क्यारेक्टरहरूमा भर पर्नुको सट्टा आफ्नै गतिमा उच्च कक्षाहरूमा अगाडि बढ्नुको सट्टा तिनीहरू आफ्ना सहपाठीहरूको प्रदर्शनमा अड्किएका छन्। त्यसोभए यसले कथालाई के गर्छ र यसले श्रृंखलाका पात्रहरूलाई कसरी असर गर्छ?
क्लासरूम अफ द एलिटबाट क्रूज शिप - एलिटको क्लासरूम व्याख्या गरियो
शृंखलाको सुरुमा, पात्रहरू कक्षा D (हामी मुख्यतया एनिमेमा पछ्याउने कक्षा र त्यो कक्षा कियोटाका मा छ), प्राय जसो सबै मिलेर आफुलाई परिचय गराउने प्रयास गर्छन्, जबकि ती मध्ये कोही द्वन्द्व र टकरावबाट पछि हट्दैनन् र सुरुदेखि नै तर्क र असहमत हुन्छन्। हामी यो सुडोसँग धेरै देख्छौं, किनकि ऊ सधैं झगडा गर्छ होरिकिता, उसले आफ्नो बल र साहस को आधार मा वर्ग को लागि लाभ को बावजूद।
Kiyotaka ले एउटा सम्झौता गर्छ - क्लासरूम अफ द एलिट व्याख्या गरिएको छ
औसत कक्षा अंक प्रणालीको सम्पूर्ण बिन्दु यो हो कि यसले सहपाठीहरूलाई सँगै काम गर्न बाध्य पार्छ। तिनीहरूले एकअर्कासँग काम गर्नुपर्दछ ताकि तिनीहरू तल रहिरहने छैनन् र अवश्य पनि रहन्छन् कक्षा D.
एस बिन्दुहरू के हुन्?
S Points को बारे मा जान्न को लागी पहिलो यो हो कि तिनीहरू मूलतया सामान्य बिन्दुहरु जस्तै छन्, फरक मात्र यो हो कि तिनीहरू विभिन्न तरिकामा प्राप्त हुन्छन् र सामान्यतया विद्यार्थी वा कक्षाले कार्य पूरा गरेपछि वा विद्यार्थीले अतिरिक्त अंक प्राप्त गरे पछि थपिन्छन्। उसले पूरा गरेको कार्यको, वा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, उसले पूरा गरेको अतिरिक्त कार्य। तपाईले जति धेरै हेर्नुहुन्छ एनिमे अधिक अंक प्रणाली अर्थ बनाउँछ। मूलतः यो निम्नानुसार छ:
क्रेडिट: विकी फ्यान्डम
एस-पोइन्ट (Sポイント, Esu Pointo): यस्तो पनि भनिन्छ S- प्रणाली (एसओसी, Esu Shisutemu) मा एनिमे, S-Point संस्थापक विशेषताहरू मध्ये एक हो जसले ठूलो मात्रामा प्रतिष्ठामा योगदान पुर्‍याउँछ। उन्नत पोषण हाई स्कूल र यसका विद्यार्थीहरूको आशाजनक भविष्य। तर, यो प्रणालीको अवधारणा अझै खुल्न सकेको छैन ।
कक्षा बिन्दु (クラスポイント, कुरासु पोइन्टो): यी प्रत्येक कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई समान रूपमा दिइन्छ र कक्षाको कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्दै कक्षाहरू बीच फरक हुन्छ। यद्यपि सबै लेखाङ्कित कारकहरू अझै पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गरिएको छैन, एउटा कुरा निश्चित छ कि तिनीहरू शैक्षिक स्थिति सुधार गर्न वर्गको प्रयास मार्फत जम्मा हुन्छन्। थप रूपमा, यी मानहरू प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा घोषणा गरिन्छ। यद्यपि, दुर्लभ अवस्थामा जहाँ कक्षाहरू बीच विवाद हुन्छ, तिनीहरूको सम्बन्धित वर्ग बिन्दुहरू होल्ड र विचार-विमर्शमा हुन्छन्। एक वर्ग बिन्दु 100 निजी अंक बराबर छ।
निजी बिन्दु (プライベートポイント, पुरैबेतो पोइन्टो): यी प्रत्येक विद्यार्थीसँग हुने स्थानान्तरण योग्य मात्रात्मक मानहरू हुन् जसलाई लेनदेन, व्यापारिक व्यापार र सम्झौताका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ किनभने तिनीहरू मौद्रिक एकाइमा परिवर्तनीय हुन्छन्। मूल्य पनि प्रत्येक विद्यार्थीको लागि प्रत्येक महिनाको सुरुमा 100 को कारक द्वारा तिनीहरूको सम्बन्धित कक्षाहरूले राखेका कक्षा बिन्दुहरूमा बढ्छ; जसको मतलब, यदि कक्षाले पूरै महिनाको लागि 1,000 कक्षा बिन्दुहरू कायम राख्छ भने, त्यो कक्षाका प्रत्येक विद्यार्थीले अर्को महिनाको सुरुमा थप 100,000 निजी अंकहरू पाउने आशा गरिन्छ। प्रत्येक बिन्दु मुद्रामा 1 येन लायक छ।
संरक्षण बिन्दु (プロテクトポイント, Purotekuto Pointo): सुरक्षा बिन्दुहरूले तपाईंलाई निष्कासन ओभरराइड गर्ने अधिकार दिन्छ। यदि तपाइँ एक परीक्षणमा असफल हुनुहुन्थ्यो भने, तपाइँसँग सुरक्षा बिन्दु भएसम्म, तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँले गलत पाएका प्रश्नहरू रद्द गर्न। यद्यपि, यी बिन्दुहरू विद्यार्थीहरू बीच हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन।
विशेष परीक्षा (विशेषटोकु別べつ試लाई験केन, Tokubetsu Shiken): प्रत्येक कक्षाको लागि कक्षा अंक निर्धारण गर्न आयोजित परीक्षा।
कुलीन वर्गको कक्षाको अन्त्य
अब बिन्दु प्रणाली कहाँबाट आउँछ र यसले Elite को Classroom का पात्रहरूको कार्यलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि तपाईंले अन्तिम एपिसोड प्राप्त गर्नुपर्नेछ जहाँ सबैभन्दा ठूलो ट्विस्ट प्रकट हुन्छ।
पहिलो सिजनको अन्तिम परीक्षामा भाग लिनको लागि दुर्गम टापुमा पठाउँदा ४ कक्षाको परीक्षा दिइन्छ। अभिजात वर्गको कक्षा। ४ कक्षालाई आफूले चाहेको ठाउँमा क्याम्प राख्न भनिएको छ । एउटा कक्षा गोप्य गुफामा जान्छ, जबकि अर्कोले समुद्र तटमा आफ्नो शिविर सेट गर्छ र एपिसोडको लागि धेरैजसो पार्टी गर्छ। तपाईले आइडिया पाउनुहुन्छ। खेल वा परीक्षणको उद्देश्य प्रत्येक टोलीमा को नेता हो भनेर पत्ता लगाउनु हो।
4 कक्षाहरू नतिजाहरूको लागि भेला हुन्छन् - एलिटको कक्षाकोठा व्याख्या गरिएको
जब खेल सुरु हुन्छ कक्षाहरूले सबैले निर्णय गर्नुपर्छ कि त्यो टोलीको लागि टोली नेता को हुनेछ। जो कोही त्यो टोलीको लागि टोली-नेता हो उसले अरू टोलीहरूलाई आफ्नो पहिचान कहिल्यै प्रकट गर्नुपर्दैन। त्यसैले प्रत्येक टोलीको लागि प्रत्येक टोलीको नेता को हो भनेर पत्ता लगाउने उद्देश्य हो। समूहहरू बीच धेरै द्वन्द्वहरू छन्, जस्तै कक्षा सी एक समुद्र तट पार्टी छ र कक्षा बी भित्रका केही केटीहरूको अन्डरवियर चोर्न जासूस पठाउँछ कक्षा D.
Kiyotaka को Intellegence देखाइएको छ (फेरि)
यो सबै कक्षा D को लागि भयानक रूपमा गइरहेको जस्तो देखिन्छ, अन्त्य नभएसम्म जहाँ यो देखाइएको छ कक्षा D वास्तवमा सबैभन्दा अंक प्राप्त खेल जित्यो। यो सबै कारणले हो कियोटाका, जसले खेलको सुरुमा नोटिस गर्छ कि यदि तपाइँसँग साँच्चै राम्रो कारण छ भने तपाइँ तपाइँको कक्षा नेता परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। होरिकिता जो क्लास लीडर बन्ने निर्णय गरिएको छ जब उनी शिविरबाट अन्डरवियर चोर्दै आएकी एक केटीलाई रोक्न प्रयास गर्न बाहिर जान्छिन् तब बिरामी हुन्छिन्, अन्ततः जब उनी चोरसँग समातिन् तब कठोर वर्षा र हावाको चपेटामा परिन्।
कियोटाकाले खुलासा गरे कि उनी ति होरिकिताको साथमा नेता थिए - क्लासरूम अफ द एलिट व्याख्या गरियो
यसको कारण, कियोटाका कक्षाको नेतालाई आफैंमा परिवर्तन गर्छ, र कसैलाई पनि बताउँदैन, होइन होरिकिता। अन्य टोलीमा सबैले यो मान्छन् होरिकिता अरू कसैको सट्टा। जे भए पनि तिनीहरू किन हुनेछन्? होरिकिता सबैभन्दा चतुर, चालाक र हेडस्ट्रांग छ, यो उनको हुनुको लागि सही अर्थ हुनेछ।
अन्तिम सम्मान - अभिजात वर्ग को कक्षा को व्याख्या
एनिमे अभिजात वर्गको कक्षा एक महान एनिमे थियो र निश्चित रूपमा मेरो ध्यान खिच्यो। मलाई पहिलो एपिसोड मन पर्यो र यसैले मैले यसलाई अन्त्यसम्म हेरिरहें। समस्या साँच्चै त्यो हो अभिजात वर्गको कक्षा निर्णायक अन्त्यमा छोडियो। हामीले अर्को परीक्षा हेर्न पाएनौं जुन प्रत्येक कक्षामा जानेछ, र हामीले पक्कै पनि थप हेर्न पाएनौं। कियोटाका उसले एपिसोडको अन्त्यमा दिएको सानो भाषण जब उसले सोचिरहेको छ होरिकिता र कसरी उनी साँच्चिकै साथी होइनन्, सहयोगी नहोस्।
Horikita, Kushida र Kiyotaka सँगै लिफ्ट लिन्छ - Elite को कक्षा को व्याख्या
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने एलिट सीजन २ को कक्षा त्यसपछि कृपया एनिमको बारेमा हाम्रो अघिल्लो लेख पढ्न विचार गर्नुहोस् यहाँ, जहाँ हामी जान्छौं यदि त्यहाँ अझै पनि अनुकूलन गर्न सामग्री छ भने, यो कहिले रिलीज हुन्छ, यसको कारण सम्भव छ र थप। यदि तपाईंलाई यो लेख पढेर रमाइलो लाग्यो भने, कृपया तलको हाम्रो मेलिङ लिस्टमा गाउने विचार गर्नुहोस् ताकि हामीले यस्तो नयाँ लेख प्रकाशित गर्दा तपाईंले कहिल्यै पनि अपडेट नछुटाउनु होला। पढ्नको लागि धन्यवाद, सुरक्षित रहनुहोस् र राम्रो दिन होस्।
तल हाम्रो मेलिङ सूचीमा साइन अप गर्नुहोस्।
साइट र यसका सिर्जनाकर्ताहरूलाई समर्थन गर्न क्र्याडल दृश्य व्यापारिक वस्तुहरू खरिद गर्नुहोस्।
अघिल्लो प्रविष्टि The Way of the Househusband Season3रिलिज मिति
अर्को प्रविष्टि कोमी Shoukou को हो - कोमी संचार गर्न सक्दैन